Rolling Stones Prague Tickets | Tendrombohitra goavam-be, Tendrombohitra Jizera, Paradisan'i Bohemia
HomeUncategorizedRolling Stones Prague Tickets
4.7.2018 by PetrPikora.com
Manàna fahombiazana tsy hay hadinoina. Olona mihoatra ny dimampolo alina no manantena ireo mpikarakara amin'ny fampisehoana ny fampisehoana ny "Rocking Stones" any Prague. Ny mozika Rolling Stones Ny fampisehoana amin'ny Alarobia amin'ny lozam-piaramanidina Letňany dia tsy manakana ny zavatra rehetra. Ny sasany amin'ireo tompon'ny tapakila anefa dia mitaraina fa ny fampakàrana RFID mila hidirana amin'ny toeram-pianarana dia tsy voahosotra amin'ny lahatsoratra. Ny olona manana tapakila manan-kery, fa ny fehin-tànana haka azy ireo, mazava ho azy, ny fampisehoana dia tsy ho avy, na dia fanitsiana dia tsy mampahazo aina tanteraka. Tsy toy ny olona miaraka amin'ny fehin-tanana teo an-tànany tsy mety handeha be hatrany ny faritra, dia tsy maintsy hijoro eo afovoany misy soratra hoe jereo ho toy ny "mpanjifa fanohanana". Io dia hijanona eo anelanelan'ny fiantsonan'ny metro Letoumany sy ny fidirana ao amin'ilay trano.
Na izany aza, izay manana seza dia tsy maintsy manana tapakila na izany aza. Ny bracelet ihany no ampy hiditra ny faritra mijoro. Izy io ihany koa dia hiasa ho toy ny hany fomba handoavana sakafo na fahatsiarovana.
Ankoatra ny antony matetika ny zavatra voarara tsy hitondra entana na lehibe kokoa noho ny habe A5 amin'ny tsy misy ny faritry fitehirizana.
Letňany seranam-piaramanidina sarotra dia hovohana tamin'ny Alarobia in 14 ora avy 18 ora tokony hampiditra Soisa tarika Gotthard amin'ny fito amin'ny hariva dia nitodika tany Prague safidy sy ny Rolling Stones no fandaharam-potoana dia tokony hanomboka amin'ny valo sy sasany.
Ny Rolling Stones dia tarika rock britanika tarihan'ilay mpihira Mick Jagger. Avy any Londres ao amin'ny 1962 izy io ary mbola milalao anio. Nanjary malaza ho ny fiandohan'ny 60 ilay tarika. flight 20. taonany ho toy ny mpifanandrina amin'ny The Beatles. Ilay guitarist Brian Jones no nitarika ny tarika tany am-piandohana. Miaraka amin'ny fiakaran'ny lazan'ny mpitarika tamin'ny antokon'ny miaramila fa nihena tsikelikely ny heriny ary ny faran 'ny sixties no tao amin'ilay tarika efa tsy mahatakatra. Ny vondrona fototra lasa loha laharana mpihira sy mpitendry gitara Mick Jagger Keith Richards, izay taorian'ny fiovana isan-karazany ao amin'ny vondrona nandatsaka miasa ao amin'ny Rolling Stones nanomboka. Brian Jones aloha dia nanomboka very ny fanaraha-maso ny tranga tamin'ny taona 1960 - ny zava-mahadomelina. Tamin'ny fahavaratra 1969 dia maty tamin'ny toe-javatra tsy mazava tao amin'ny dobo tao an-tranony. Taorian'ny nahafatesany dia tonga tao amin'ilay tarika ilay mpitendry guitarista Mick Taylor. Nandao ny tarika tao 1974 izy. Ny lahatsoratry ny guitarista dia nanipy an'i Ronnie Wood tsy ela. Fotoana fohy taorian'ny fitetezam-paritra nahomby ny manan- "Steel Wheels - Urban Jungle" izay ny tarika voalohany tonga tao amin'ny lahatsoratra-kaominista Tsekoslovakia, nandao ny tarika bassist Wyman Bill. Raha oharina amin'ny mpikambana hafa tamin'ny antokon'ny miaramila tokony ho enin-taona teo ho miakatra. Ihany toy ny mpikambana ivelany, hisolo American Darryl Jones.
Ao amin'ny Rolling Stones 1989 dia tafiditra ao amin'ny Hall ny Fame Rock sy Roll (Rock sy Roll Hall ny Fame), ary in 2004 ny Britanika Music Hall ny Fame (UK Music Hall ny Fame). gazetyVato mikodiadiadia laharana fahaefatra amin'ny lisitr'ireo mpanakanto "100 lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra" sy BritanikaQ magazineeo amin'ireo "dimampolo dimam-polo izay tsy maintsy hitanao alohan'ny hahafatesanao".
Tany am-piandohan'ny taom-polo 20. Taonjato taonany, Keith Richards sy Mick Jagger dia mpinamana sy mpiara-mianatra tamin'ny sekoly ambaratonga fototra. Avy eo dia nizarazara ireo dia, Richards nanatrika ny sekoly ambaratonga faharoa, Jagger dia naniry ny sekoly ekonomika. Taona maro tatỳ aoriana, dia nihaona tamin'ny lamasinina ry zareo. Jagger dia nanana an'i Chuck Berry sy Muddy Waters teny an-tanany. Tamin'io fotoana io, tsy afaka nanangona be ireo boards ireo, nandidy azy ireo mivantana avy amin'ny katalaogy Chess i Jagger. Nanaitra an'i Richard izany ary nanaiky hanangana antoko iray. Nosoratana koa i Dick Taylor, izay nanatri-maso ny tarika Pretty Things tatỳ aoriana. Niaraka nitady gitara izy ireo, ary nampirisika an'i Brian Jones i Jagger, izay nitendry gitara Blues Incorporated tarihan'i Alexis Korner. Ao amin'ny Blues Incorporated dia mpikambana roa hafa an'ny Rolling Stones - Ian Stewart sy Charlie Watts - nilalao.
Stewart ela dia nahita toerana izay afaka ambarao, ka niaraka Jones, izay efa nampanantena ny fametrahana ny R & B tarika izay hilalao Chicago BLUES. Ny fiangonana dia vita tamin'ny volana Jona 1962 (Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor). Fitsapana voalohany no nanatrika ny mpitendry gitara Tony Chapman sy ny mpihira Brian Knight, izay tsy nety fa ny tarika handray anjara satria tsy te-hilalao hira amin'ny Chuck Berry sy Bo Diddleyho tia Jagger sy Richards.
Ho an'ilay anarany, tonga teo amin'ny filazan'i Richard fa nangataka ny anaran'ilay tarika i Brian Jones nandritra ny resadresaka an-telefaona tamin'ny mpanao gazety Jazz News. Tsikariny fa teo amin'ny tany niaraka tamin'ny Rollin Stone no nisy ny Muddy Waters.
Ny fampisehoana voalohany dia nilalao tamin'ny 12. Jolay 1962 tao amin'ny club club Marquee, antsoina hoe The Rollin 'Stones. Ny endriky ny tarika dia: Jagger Singing, Richards and Jones Guitars, Stewart Piano, Taylor Bass ary Chapman Drums.
Jones sy Stewart dia naniry ny hitazona ny blues azy ireo, saingy nanaiky koa izy ireo tamin'ny Chucka Berry sy Bo Diddley, izay nanosika an'i Jagger sy Richards. Bilaogera Bill Wyman dia nanatevin-daharana ilay tarika tamin'ny Desambra 1962, mpikatroka Charlie Watts iray volana taty aoriana. Izy ireo no namorona ny iray amin'ireo fizarana rhythmest.
Ny mpitantana ny Rolling Stones, Giorgio Gomelsky, dia nanamafy ny fampisehoana tao amin'ny klioba Crawdaddy, izay, hoy izy, dia tao ambadiky ny "fahatsiarovana iraisam-pirenena amin'ny blues". Ireo no concert tao amin'io klioba io sy ny fisondrotry ny Beatles izay mbola tsy nisy toy izany, izay nolazainy fa ny fahatongavan'ny fiovana ara-tsosialy fantatra amin'ny hoe fihodinana an'i Londres.
Nanatona mpikarakara iray hafa, Andrew Loog Oldham, ilay tarika, ary nanasonia ny fifanekena ihany koa. I Oldham dia te-hanomboka hiara-miasa amin'i Erick Easton, mpitantana efa za-draharaha. Rehefa nanasonia ny Easton, dia nisy ihany ny fahasarotana: sivy ambin'ny folo taona i Oldham, izay nanakana azy tsy hanasonia ny fifanarahana; Izy dia tanora noho ny iray tamin'ireo tarika. Ny fifanarahana tamin'i Easton dia nosoniavin'ny reniny. Gomelsky, izay tsy manana fifanarahana voasoratra amin'ny tarika, dia tsy noraisina mihitsy.
Ny Decca Records, izay mbola nanenina noho ny namoany ny Beatles, dia nanao sonia fifanarahana tamin'i Oldham sy Easton tamin'ny fepetra tsy ankasitrahana. Ny Rolling Stones dia nifampiraharahamana avo telo heny mahery, ary koa ny fanaraha-maso tanteraka ny fandraisana an-tsoratra sy ny maha-tompony azy avy amin'ny horonantsary fandraketana. Ny fifanarahana dia nahatonga an'i Oldham hampiasa studio fianarana hafa fa tsy i Decca. Ny Regent Sound Studios dia nofinidy mba hanana fitaovana tsara indrindra amin'ny fotoanany. Na dia tsy nanana traikefa tamin'ny fandraisam-peo aza i Oldham, dia nandray ny anjara asan'ny mpamokatra amin'ny fahatokisany izy. Hoy koa izy: "Ny feon'ny fitaovana iray dia re hatrany amin'ny dian-tongotry ny fitaovana hafa, saingy tokony ho izany. Izany dia namorona feo amina horonam-peo marim-pototra. "Tsy dia lafo ny fandalinana nataon'ny Regent, ka nahafahan'ny tarika nanoratra mihoatra noho ny ora telo mahazatra. Ny fotoam-pandraketana lava dia nanjary nalaza ho an'ny tarika. Ny lalan-dàlana rehetra amin'ny dikan-teny anglisy amin'ny rakitsoratra voalohany dia voarakitra ao amin'ny studio Regent.
Navoakan'i Oldham avy eo ny Rolling Stones ho tarika izay mampiasa studio tsy miankina. Araka ny heviny, nanome malalaka ny tarika noho ny The Beatles. Nampiasa ny trano fandraisam-bahiny EMI izy ireo, izay, araka ny voalazan'i Oldhama, dia niantoka ny feo malefaka sy mahomby. Amin'ny maha mpitantana azy, dia niezaka izy nanao ny akanjon'ilay tarika tamin'ny fomba mitovy. Na izany aza, nandritra ny fampisehoana, ny tarika dia nanao akanjo lava. Ny tarika dia efa hita ho toy ny mpanohitra ny Beatles. Nanampy izy sary ireo tovolahy tezitra eo amin'ny fonon'ilay rakikirany voalohany, ary koa lohateny toy ny hoe "Tianao ve ny zanakao haka olona avy amin'ny Rolling Stones?" Fa i Bill Wyman kosa manampy hoe: "Ny lazanay ho an'ny zazalahy ratsy dia tonga taty aoriana, ary fifandrifian-javatra izany. Tsy nanao izany mihitsy i Andrew. Nalahelo anay fotsiny izy. "
Oldham ihany koa no nanova ny anaran'ny tarika tamin'ny "The Rollin 'Stones" ho "The Rolling Stones" ary nanova an'i Keith Richards anarana ho an'i Richard satria "nijery pop". Tsy nitovy tamin'i Oldham i Stewart. Tsy nitovy tamin'ny tovolahy tsara tarehy sy malefaka ary lava volo izy, ary tsy nifanaraka tamin'ny sarin'ireo tovolahy tanora tezitra. Nanolotra azy ny anjara asan'ny pianista amin'ny fandraisam-peo sy ny andraikitry ny mpitantana an-dalambe. Nanaiky i Stewart. Fa i Stu kosa dia nanana ny fo goavana indrindra amin'ny olona rehetra lavitra. "Stewart dia mpilalao pianista nanintona tamin'ny fampisehoana, nandray anjara tamin'ny fandraisam-peo, ary toy ny mpitantana an-dalam-pitandremana ny fitsidihan'ny Stones rehetra. Ary mandra-pahafatin'i 1985.
Ny fahatsiarovana ilay hira "Come On" nataon'i Chucka Berry dia lasa mpitovo voalohany. Nivoaka i 7. Jolay 1963. Ny vato Rolling dia tsy nety nilalao ary i Decca dia namela dokam-barotra iray monja. Teo ambany fitarihan'ny mpitarika Oldham, dia nanomboka nividy mpitovo tao amin'ny toeram-pivarotana ao an-toerana ireo mpikambana ao amin'ny fanclub, izay nanampy azy hiakatra any amin'ny 21. ny tablety singa Britanika. Ny toerana ao anatin'io tabilao io dia misokatra fifanakalozan-kevitra ho an'ireo toerana hanaovana fampisehoana ivelan'i Londres. Ny famoahana voalohany ny Stones dia natao tamin'ny 13. Jolay ho Middlesbrough, iray hetsy zato, izay niarahan'izy ireo niaraka tamin'ny The Hollies. Tamin'ny fiafaran'ny taona, nibolisatra nanerana an'i Grande-Bretagne i Oldham sy Eas. Ny vato dia natao ho mpialoha lalana an'ireo kintana amerikana (sy ny teti-dratsiny) Bo Diddley, Little Richard ary The Everly Brothers. Ny fitsangatsanganana dia traikefa lehibe ho an'ny tarika hanatanterahana ny dingana.
Nandritra io fitsidihana io, ny Rolling Stones dia nandrakitra ny laharana faharoa nosoratan'i Lennon sy McCartney. Ny olona "I Want Be Be Your Man" dia napetraka ao amin'ny 12. toerana ofisialy Anglisy. Bebe kokoa - toerana fahatelo - ilay tokana fahatelo "Tsy fongana". Indray mandeha indray ny dikan-drakitra, ny hiran'i Buddy Holly tamin'ity indray mitoraka ity.
Nijaly i Oldhama fa naniry ny hihira ireo hira "Middle Age Age Negroes" ny tarika. Te hanolo-tanana amin'ny tanora iray izy, saingy nanana olana tamin'ny famerimberenana toy izany izy. Teo am-pihenjanana izy dia nanomboka namorona ny sangan'asany voalohany i Jagger sy Richards. Na izany aza, ny tantaran'izy ireo voalohany dia manoritsoritra ny hoe "mamaivay". Noho ny fanoratana ny hirany manokana dia nandeha moramora, tao amin'ny rakikirany voalohany, The Rolling Stones, navoakan'i 16. April 1964 dia namoaka dikan-teny maimaimpoana. Ny hany afa-tsy dia hira avy amin'ny atrikasa ny Jagger sy Richard "Lazao Me (ianao Avy Miverina)", ary hira roa no nanao sonia ny solonanarana ao ambadiky Nanker Phelge izay nanafina ny tarika iray manontolo. Tamin'ny volana Mey, navoaka tany Etazonia ny rakikira teo ambanin'ny lohateny hoe "Hitan'ny mpitsangatsangana farany indrindra any Angletera".
Ny hetsika Rolling Stones voalohany tany Etazonia tamin'ny Jona 1964 dia loza, araka ny voalazan'i Bill Wyman. "Rehefa tonga izahay dia tsy nahita zavatra na zavatra mety hahalalanay anay." Nalefa tao amin'ny fahitalavitra Dean Martin ny tarika, ary nahitana hira maro koa izy. Saingy i Martin dia naneso ny fomba fijerin'izy ireo, fa koa ny fomba sy ny lalao. Nofatorana nandritra ny roa andro ihany koa ireo vato tao amin'ny Akademia firaketana an-tsarimihetsika, izay nomen'i Jagger ny lisitry ny horonantsary nandritra ny taona maro. Nihaona tamin'ny modely lehibe Muddy Watters tao amin'ny studio izy ireo. Nisy zavatra natao taminy, saingy ny fifaneken'ny Watters dia tsy namela na inona na inona natao taminy. Tao anatin'ireo fotoam-piraketana roa ireo, ny voalohany #1 dia nahitana vato "Stumble all over now", ny version cover of the song by Bobby Womack, dia navotsotra avy eo.
Ao Etazonia, ny The Stones dia natao tao amin'ny TV Show TAMI, izay niarahany tamin'i James Brown. Na dia amin'ny Jagger "... tena tsy hanaraka hatramin'ny swiveling eo amin'ny vato dia misy fiatoana maro. Na dia izany aza, nalahelo mafy i Brown. "Ny stones koa dia tokony hanao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Ed Sullivan. Saingy noho ireo mpankahala tsy afa-nihetsika izay nahasarika ny tarika, nanaisotra ilay fanasana hitifitra izy. Saingy nandritra ireo taona maro ho avy dia nantsoina imbetsaka izy. Ny vilia faharoa 12 5 X, izay navoaka tany Etazonia (Oktobra 1964) ao mihoatra noho ny antsasaky ny fonony hira, ny sasany indray dia nanao sonia ho Jagger / Richards sy Nanker Phelge solonanarana.
Ny laharana fahadimy tany Grande-Bretagne dia "Little Red Rooster," hira iray nalain'i Willie Dixon. Etsy ankilany, ny "Off the Hook" dia nosoratan'ny pseudonym Nanker Phelge. Navoaka tamin'ny volana 1964 ilay olona tokana. Ho an'ny vato, izy dia faharoa tao amin'ny charts UK - ho an'ny hira mozika, zavatra tsy nisy teo aloha. Na izany aza dia nolavin'ny mpaninjara Amerikana ny "Red Little Rooster" mba hamotsorana ireo vato Rolling voalohany, izay nisy ny andaniny tao amin'ny atrikasa Jagger / Richards: "Heart of Stone" ary "Mahamenatra".
Rollstone faharoa any UK Ny Rolling Stones No. 2 dia efa lasa antonta-bolon'ny britanika voalohany. Ny dikany amerikana an'ny The Rolling Stones, Ankehitriny! dia nahatratra ny laharana fahadimy tao amin'ny laharana Amerikana. Ny rakikira dia voarakitra an-tsehatra amerikana, ampahany amin'ny fandalinana ny orinasa Chess in Chicago, ampahany amin'ny studio RCA any Los Angeles. Tamin'ny janoary sy febroary 1965, dia nanao fitsidihana an-dalamby tany Nouvelle Zélande sy Aostralia ny tarika, izay nahitana mpankafy zato tapitrisa.
Izany dia narahana ny "The Last Time", ny voalohany amin'ny atrikasa Jagger / Richards, izay lasa britanika britanika. Tany Etazonia dia fahadimy ihany izy. Nanamarika i Richards tatỳ aoriana fa "fandrosoana ny mieritreritra ny fomba hananganana Stones. Io ilay tokan-tena izay naneho ny fomba hanaovana izany. "Nanaraka ny tsy nahazoako ny tsy fahafaham-po, izay noraisin'ny tarika tamin'ny May 1965 tamin'ny diany fahatelo tany Amerika Avaratra. Izany dia fampiasana mahazatra ny vokatra gitara mandoza. Richards dia nieritreritra voalohany fa ho fanampim-panazavana ho an'ny fizarana varahina izay hiditra ao. Oldham, na izany aza, namoaka "fahafaham-po" tsy misy fofon'aina, afa-tsy amin'ity rihitra gitara ity. Navoaka tany Etazonia i Singl, izay naharitra efatra herinandro teo an-tampon'ireo takelaka.
Sary amerika hafa antsoina hoe Out of Our Heads. Navoaka tamin'ny volana 1965 izy ary nanjary tabilao manaraka. Nisy zavatra fito niorina tamin'izany - ireo telo no nanasonia an'i Jagger / Richards, efatra teo ambanin'ny solon'anarana Nanker Phelge. Tamin'ny fararano, olon-tokana iraisam-pirenena hafa, "Get Off of My Cloud" no navotsotra. Fotoana fohy taorian'ny famoahana dia LP iray hafa ho an'ny tsena amerikana: "Children's December".
Album manaraka Aftermath (1966, voalohany tany Angletera, faharoa tany Etazonia) no voalohany nanasongadina trakitra nosoniavin'ny ekipa Jagger / Richards. Brian Jones dia tsy mitendry gitara sy harmonica eto, fa ao Paint It Black dia milalao ny sitar izy, miaraka amin'ny mpihira sy "Under My Thumb" marimba ao amin'ny lalaon'ny "Lady Jane". Mahavariana ihany koa ny tohotra roa ambin'ny folo minitra "Goin 'Home", izay na dia ny milina aza dia miato mandritra ny fotoana maharitra; dia ny voalohany toy izany hatrany eo amin'ny rakibolana rock'n'roll tsara indrindra.
Ny fahombiazan'ny Rolling Stones tamin'ny horonan-tsarin'ny britanika sy amerikana dia nitohy nanerana ny 1966. Ny "19th Nervous Breakdown" (Febroary, faharoa tany Grande-Bretagne sy Etazonia) dia nanaraka ny voalohany teo amin'ny roa tonta tao amin'ny Atlantika "Mother Little Helper" (June 1966). Nifanena tany Etazonia fotsiny izy, ary nahazo ny toerana fahavalo izy. Izy io no hira voalohany amin'ny hira izay mihira am-pahibemaso momba ny zava-mahadomelina sy ny fidorohana zava-mahadomelina.
Tamin'ny volana septambra 1966 dia nahatsikaritra ny fahazavan'izao tontolo izao hoe "Nahita Reny Ianao, Ankizy, Mijoro Amin'ny Aloka?". Izy io no vato tokana tokana voalohany, izay nampiasa fialamboly, iray amin'ireo singulier voalohany nampiasa fanehoan-kevitra gitara, ankoatra ny iray amin'ireo mozika voalohany.
Tamin'ny Janoary 1967 dia namoaka ny Album Between the Buttons (ny fahatelo any UK, faharoa ao Etazonia); no farany novokarin'i Andrew Oldham. Ny anjara asany dia nalain'ny mpampianatra Beatles tsikelikely, Allen Klein. Amin'ny maha-tokana azy, nivoaka ilay hira hoe "Ndao handao ny alina miaraka" amin'ny "Ruby Tuesday" eo ampita. Rehefa tonga tao New York ireo Stones, dia nanao zavatra vitsivitsy ihany koa izy ireo tao amin'ny fahitalavitra Ed Sullivan; dia voatery nanova ny lahatsoratra tao amin'ny fiverenan-kira mba "andao hiara-misakafo indray alina".
Tamin'ny volana martsa, raha niandry ny vokatry ny Redlans ny tarika, Jagger, Richards sy Jones dia nanao dia lavitra nankany Maraoka. Niaraka tamin'i Marianne Faithfull sy Anita Pallenberg namany namany izy ireo. Nifarana tamin'ny dia fifandraisana feno hafanam-po teo amin'i Jones sy Anita Pallenberg, izay niala tao Maraoka niaraka tamin'i Keith Richards. Hoy koa i Richards tatỳ aoriana: "Io no vatam-paty farany teo amin'ny vatam-paty teo amin'ny fifandraisako tamin'i Brian. Tsy hamela ahy velively izy, ary tsy fantatro izy, ary miseho ny rivotra. "Naharitra roa ambin'ny folo taona ny fifandraisana nisy teo amin'i Keith sy Anita. Na dia teo aza ireo zava-tsarotra ireo, dia nitantana ny Tour 1967 European March ny vondrona tamin'ny Martsa sy Aprily. Ny vato voalohany natao voalohany tany Polonina, Gresy ary Italia.
Ao amin'ny 10. May 1967 - Tamin'io andro io ihany no niampangan'i Jagger, Richard sy Fraser fanolanana ny fanolanana an'i Redlans - nipoaka ny tranon'ny Brian Jones. Nosamborina i Brian mba hitazonana marijuana. Ny telo amin'ireo mpikambana dimy ao amin'ny Rolling Stones dia miatrika fiampangan'ny polisy ankehitriny. Ao amin'ny 29. Ny volana jona dia i Jagger no voaheloka higadra telo volana noho ny takelaka takelaka amphetamine efatra. Nomena tsiny i Richards tamin'ny famelana ny fifohana sigara tao amin'ny taniny. Nahazo taona am-ponja izy. Samy nogadraina izy ireo, fa noho ny antso nalefa ny ampitso. Ny lahatsoratra malaza Times mitondra ny lohateny hoe "Iza no te hanongotra lolo iray eo am-pandriana?", Ny mpanoratra azy izay tena nanakiana mafy ny sazy, koa dia nisy fiantraikany tamin'ny famotsorana. Nilaza izy fa nanao sazy henjana kokoa noho i Jagger i Jagger noho ireo tovolahy tsy fantatra anarana.
Tamin'ny volana Desambra 1967 no namoaka ny sarin'ny Satanic Majesties Request (ny fahatelo any Angletera, faharoa any Etazonia), indrisy, fotoana fohy taorian'ny Sgt. Ny Band of Hearts Club of lonely from Beatles. Ny raharaham-barotra dia tao anatin'ny fepetra henjana satria i Jagger, Richards sy Jones dia tsy maintsy niatrika ilay raharaha. Nanaisotra an'i Andrew Oldham nandritra ny fandraisam-peo ny band. Mahafinaritra ny lalao, farafaharatsiny araka ny gazety. Na izany aza, tao amin'ny 2000, i Jagger dia nanampy hoe: "Ny antony nandao an'i Andrea dia ny niheverany fa tsy afaka mifantoka tanteraka amin'ny asa isika ary lasa zatovo kokoa. Tena tsy nahafinaritra izany - ary heveriko fa tsy nahafinaritra azy koa izany. Avy eo dia misy singa mampikorontan-tsaina, saingy mila olona foana isika izay afaka mitari-dalana antsika amin'ny lalana tsara. Izany no asany. "
Ny Majy Satanic dia nanjary voalohany voalohany ny Stones novokarina. Io ihany koa no rakikira voalohany navoaka tamin'ny dikan-teny mitovy amin'ny andaniny roa amin'ny Atlantika. Ny feony ara-pihetseham-po dia mameno ny fonosana 3D sary Michaela Coopera, mpanoratra sary ilay saribakoly boribory Sgt malaza. Ny Fitiavam-bavaka manirery. Bill Wyman dia nanoratra sy nihira ilay hira hoe "In Another Land", izay lasa nivoaka irery. I Jagger voalohany no tsy nihira ny feo tena izy.
Ny volana voalohany amin'ny 1968 dia nandany ny tarika niasa tamin'ny rakitsary hafa. Avy amin'ireo sombin-tserasera ireo dia tonga ny "Jumpin 'Jack Flash", izay navotsotra tamin'ny volana Mey. Ny feony, ary koa ny feon'ilay volombava Banett rehetra (ny fahatelo any Angletera, ny fahadimy any Etazonia), dia fifangaroan'ny firenena sy blues. Niverina tany amin'ny fotony ny tarika. Nanomboka niara-niasa tamin'ny mpamokatra Jimmy Miller miaraka amin'ity rakikira ity izy. Ilay olona malaza Street Fighting Man, natokana ho an'ny korontana ara-politikan'ny May 1968, ary ny lohateny hoe "Fanentanana ho an'ny Devoly" dia mendrika lazaina.
Tamin'ny faran'ny 1968, nanao andian-dahatsary i Stones tao amin'ny hippiaram-peo antsoina hoe Rock and Roll Circus. Izy ireo dia nilalao an'i John Lennon, Yoko Ono, The Dirty Mac, The Who, Jethro Tull, Marianne Faithfull ary Taj Mahal. Ny fampisehoana ny Stones dia tsy nifanaraka tamin'ny fisainany, ka nivoaka ny Circus taorian'ny taona 28.
Ny olana mitombo ao amin'i Brian Jones dia nitarika ny tsy nahatongavany tao amin'ny firaketan'ny Banquet Banquet. Nilaza i Jagger avy eo fa "tsy tokony hitarika fomba fiaina toy izao i Jones". Ny fampiasany fanafody tsy tapaka dia nanakana azy tsy hahazo visa amerikana. Ny tarika iray manontolo dia nahatonga azy ireo tsy hiditra amin'ny fitsidihana amerikana hafa. Ireo mpikambana hafa dia nanery an'i Jones hilaza hoe, "Mandao ny tarika aho fa raha te-hiverina aho dia afaka miverina any amin'ny fotoana rehetra." 3. Jolay 1969 - latsaky ny iray volana aorian'ny nandaozany ny Rolling Stones - i Brian Jones dia nilatsaka tao anaty dobo tao an-jaridaina tao an-tranony.
Roa andro taorian'ny nahafatesan'i Brian, ny Rolling Stones dia tao amin'ny Hyde Park any London. Izany dia ho fanomezam-boninahitra an'i Brian ny gitara ho ao amin'ny vato Mick Taylor nilalao voalohany, fieken-keloka dia maimaim-poana. Nahazo mpankafy efa ho ny iray tapitrisa ny mpanatrika. Natao ny horonantsary ary navoakan'ny televiziona Britanika izany tamin'ny anarana hoe Stones tao amin'ny Park. Jagger namaky ny elegy Adonais amin'ny Percy Bysshe Shelley sy Brian nandefa ho fahatsiarovana ny an'arivony lolo. Ny hetsika mivantana ny hira "Honky Tonk Women" dia navotsaka ho mpitovo. Sam Cutler, izay nanasongadina ny fampisehoana, dia hoy izy tamin'ny voalohany ihany: "Tompokolahy sy tompokovavy, ny tsara indrindra rock'n'roll tarika eto amin'izao tontolo izao." - izany ihany koa ny fampisehoana nasongadina tamin'ny fitsidihana tany Etazonia in 1969. Ity sticker ity dia nijanona tao amin'ny vondrona hatramin'izao.
Bilaogy hafa Let It Bleed (voalohany tany Grande Bretagne, Etazonia) dia navoaka tamin'ny Desambra 1969. Io no album farany Stones navoaka tamin'ny taona 1960. Ahitana ny hira "Gimme Shelter", izay nanoratana ny mpanao gazety Greil Marcus taty aoriana hoe "rakitsoratra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra". Ny feo vavy voalohany ao Gimme Shelter dia mpihira Merry Clayton. Ilay hira "Tsy azonao mihitsy ny mahazo anao" dia noraisin'i Corle de Corps Bach (The Bach Choir, tarihin'i David Willcocks). Nangataka ny hanaisotra ny anaran'ny amboarampeo izy avy eo amin'ny biraon'ny fononteny satria nolazaina fa nampihoron-koditra avy amin'ny votoaty hafa izy, saingy naka ilay fangatahana tatỳ aoriana. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny rakitsoratry ny "Love in Vain" nataon'i Robert Johnson sy ny "Midnight Rambler". Brian Jones dia nanao lalao roa, sy Mick Taylor.
Fotoana fohy taorian'ny fitsidihana an'i Etazonia, ny Fetiben'ny Stones dia natao tao amin'ny kianja Altamonte manodidina ny 60 miles avy any San Francisco. Stones mahatsiahy fa tsy nisy nanasa azy ireo ho any Woodstock malaza, ka nandamina ny asany manokana izy ireo. Amin'ny maha mpiambina azy, i Stones dia nanakarama ireo mpihazakazaka Hells Angels. Na dia izany aza, ny mpianatra 18 taona, Meredith Hunter, dia novonoina taorian'ny nahafatesany fitaovam-piadiana. Ny ampahany amin'ny alahelon'ny alitara dia nalaina tao amin'ny Gimme Shelter an'i David Maysels. Ho setrin'ny lazan'ny bootleg recordings, ny vondrona dia namoaka ny album mivantana Get Yer Ya-Yas Out! (voalohany tany UK, ny fahenina tany Etazonia). Ilay mpitsikera Lester Bangs dia niantso azy mihitsy aza ny rakitsoratra mivantana indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Teo am-piandohan'ny folo taona dia nanao ny fampisehoana mivantana i Rolling StonesPop Go The Sixties, izay navoakan'ny BBC 1. Janoary 1970. Nandritra ny taona, ny 1970 koa dia tsy maintsy nanao fifanarahana tamin'ny mpitantana Allen Klein sy Decca. Nandritra ny adihevitra tamin'i Klein, nanangana orinasa mpamokatra firaketana an-tsoratra ny Band, Rolling Stones Records. Ny biraonyFitiavana marevaka(voalohany tany Grande-Bretagne sy Etazonia) no lasa voalohany namoaka ity orinasa vaovao ity. Navoaka tamin'ny March 1971 ilay rakikira, noforonina i Andy Warhol. Ny rakikirany dia ahitana roa amin'ireo hitsiny malaza "Brown Sugar" sy ny "Horses Wild". Samy voarakitra tao amin'ny studio Alabama izy ireo nandritra ny fitsidihany Amerikanina tao amin'ny 1969. Naverin'ny blues indray ilay rakikira ary ilay rakikira voalohany nalain'i Mick Taylor tamin'ny hira rehetra.
Ny politikan'ny hetra henjana britanika dia nanery an'i Stones handao ny famotsoranaFitiavana marevakaAngletera nifindra monina tany amin'ny faritra atsimon'i Frantsa, ka nanofa trano Nellcôte i Keith Richards. Efitra maimaim-poana no nomena ny mpiasan'ny tarika sy ny mpiara-miasa. Mandritra izany fotoana izany, ny vondrona dia nanana kamiao iray misy ati-dahatsary ao anatiny, fantatra amin'ny hoe Rolling Stones Mobile Studio. Ao no misy ny fampisehoana vaovao, ary ny zavatra voarakitra ao amin'ny Sun Set Studios any Los Angeles dia vita nandritra ny fitsidihana Amerikana 1969. Ny vokatra dia sary roaExile on Main(voalohany tany Angletera sy Etazonia) navoaka tamin'ny May 1972. Hatreto dia heverina ho anisan'ny firaketana tsara indrindra an'i Stones. Nandritra io fotoana io dia nisy horonantsary nataoCocksucker Blues(tsy navoaka tamin'ny fomba ofisialy) aryLadies and Gentlemen: Ny vato miloko, izay manasongadina ny fitsidihany Amerikana "STP". Ny vatosoa dia miseho ivelan'ny fampisehoana miaraka amina namana maro.
Tamin'ny volana Novambra 1972, ny tarika handraketana horonantsary lalao hafa dia nisafidy ny hianatra any amin'ny tanànan'i Jamaika, Kingston. Ny rakikira nivoaka tao amin'ny 1973 dia nomena anaranaGoat Head Soup(voalohany tany Angletera sy Etazonia). Ny fivarotana ilay rakikiringa dia nanohana ilay "Angie" hitifirana. Ny birao no nanjary voalohany tamin'ireo boaty vato maromaro izay namidy tsara, nefa nahazo fanehoan-kevitra ihany izy ireo. Betsaka ny Jamaikana voarakitra an-tsoratra no nampiasaina tao amin'ny birao. Ohatra iray amin'ny hoe "miandry amin'ny namana", izay navoaka valo taona taty aoriana tao anaty rakikiraTattoo You.
Na dia izany aza, ny fandraisam-peo dia notapahin'ny fifanolanana lalàna hafa momba ny zava-mahadomelina izay mbola mifandray amin'ny fonenany any Frantsa, izay nisamborana an'i Richard. Niverina tany Frantsa ny mpikambana hafa mba handray anjara amin'ny famotorana. Ity tranga ity sy ny faharesen'i Jagger momba ny famaizana rongony (ao amin'ny 1967 sy 1970) dia sarotra ny hitsidika an'i Pasifika. Tsy navela tany Japon na Aostralia ny vondrona. Taorian'izay dia nisy fitsidihana Eoropeana (September / October 1973), saingy tsy afaka nankany Frantsa. Talohan'ity fitsidihana ity dia voasambotra indray i Richards, tamin'ity indray mitoraka ity tany Angletera.
Ny vondrona dia nisafidy ny hianatra any Munich, toerana izay nahitany ihany koa rakikira fotsyRock Only Only(faharoa tany UK, voalohany tany Etazonia). Ny vokatra dia novokarin'i Jagger sy Richards, izay nantsoina hoe "The Glimmer Twins" teo amin'ny fonony. Ny rakikiran'ilay anarana dia tonga ihany.
Teo amin'ny faran'ny 1974 dia nanomboka nikomy i Mick Taylor. Ny tarika dia tao anatin'ny toe-javatra iray izay tsy nahafahany niasa araka ny tokony izy, nisy mpikambana sasany voarara hiditra ny firenena sasany, izay nanasarotra ny fanomanana ny fampisehoana. Tamin'ny fiafaran'ny 1974, rehefa naverina tao Munich izy dia niala tao Taylor Rolling Stones. Tao amin'ny 1980, nanampy izy hoe: "Efa feno nify aho. Ankoatra izany, te-hilalao zavatra kely hafa aho ... Tamin'izany fotoana izany, tsy azo natao ny nanoratra na nanoratra hira. Nanery ny tenako aho ary nanomboka nanoratra, izay nisy fiantraikany tamin'ny fanapahan-kevitro hiala ... Misy olona afaka mitarika fahombiazana hafahafa, ary avy eo misy olona tsy ampy. Ary tsy ampy ahy izany. "
Tamin'ny horonantsary iray hafa - tamin'ity indray mitoraka ity tany Munich - Stones dia nitady hitady gitarista hafa. Peter Frampton, mpitarika ny Humble Pie, ary mpikambana taloha ao amin'ny Yardbirds, Jeff Beck mpilalao gitara. Na dia nilaza aza i Beck sy ny mpilalao rock gitara rocky Rice Gallagher, taty aoriana dia nilaza fa nilalao tamin'ny tarika izy ireo saingy tsy fantany fa teo amin'ny bankirompitr'ireo Stones gitara izy ireo. Na dia nandrakitra an-tsoratra tao Munich aza ny gitaraista Amerikana Shuggie Otis sy Harvey Mandel dia tsy nahatratra ny studio. Samy nilaza i Richards sy Jagger taty aoriana fa naniry izy ireo fa i Stones dia nijanona ho tarika britanika iray. Saingy rehefa niseho i Ronnie Wood dia nanaiky ny rehetra fa izy no safidy tsara.
Efa nosoratan'i Wood ny Stones ary nanao fampisehoana maromaro ary nitendry gitara tao amin'ny rakikiran'ny "Roll It's Only Rock", izay niara-nanoratra azy koa. Mick Jagger dia efa nilalao niaraka tamin'ny vato teo aloha, saingy i Wood dia nolavina satria nilalao tamin'ny The Faces. Wood dia nanatevin-daharana ny tarika nandritra ny fitsidihany fampisehoana tany Etazonia tamin'ny 1975. Nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy fa herintaona taty aoriana, rehefa nirodana ny The Faces. Tsy toy ny mpikamban'ny tarika hafa, i Wood dia nandray karama ara-dalàna. Naharitra roa tonta izany mandrapahatonga ny tarika nandao an'i Bill Wyman. Avy eo izy dia nandray ny vola mitovy amin'ny sisa amin'ireo mpikambana ao amin'ny Stones.
1975 dia nandao ny fitsidihan'i Etazonia tao New York Stones. Ny ampahany tamin'ireo fampisehoana dia onjam-pokonolona goavam-be iray napetraka teo amin'ny lampihazo ary ny pikantsak'i Jagger izay nibanjina ny mason'ny mpijery. Taorian'ny fitsidihana, nandidy ny fanoratana mivantana avy amin'ny klioba El Mocambo Toronto ny vondrona. Izy ihany no horonantsary fanadihadiana faharoa taorian'ny Get Yer Ya-Yas nivoaka! Navoaka tao amin'ny 1977 ilay rakikira ary nantsoina hoe Love You Live (fahatelo any Angletera, fahadimy any Etazonia).
Na dia teo aza ny lazan'ny tarika tamin'ny tapany voalohan'ny fitopolo taona, dia nanomboka nanoratra momba ilay tarika tsy sadaikatra ireo mpitsikera mozika. Ny fivarotana ny birao ihany koa dia tsy nahavaha ireo fanantenana. Tany amin'ny faran'ny taona 1970, noho ny lazan'ny punk, ny Rolling Stones dia nahazo ny mari-pamantarana ny taona efa maty am-polony taona. Niova ny zava-drehetra tao amin'ny 1978 rehefa nivoaka ny Girls (ny voalohany tany UK, voalohany tany Etazonia). Anisan'izany ny Miss You, ny Ejipsiana, ny biby sy ny herisetran'i Keith ary ny horohoro. Ireo hira dia haingana, tsotra ary mitsangana amin'ny rimp gitara. Valim-bavaka toy izany izy ireo tamin'ny fahatsorany tsotra. Ny fahombiazan'ilay rakikira dia nahatonga ny onjam-pahaizana malaza teo amin'ireo tanora mpihaino.
Navoaka tao amin'ny 1980 ilay rakikiringa Resaka Emotional manaraka ary nanaraka ny fahombiazan'ny Girls. Voarakitra be ny firaketana an-tsarin'ilay rakikira, izay i Jagger sy Richard dia nanana fifandraisana matanjaka. Richards, te-hivoaka amin'ny fahavaratra sy ny fararano 1980 izy amin'ny diany amin'ny fampisehoana mba hampiroboroboana ilay rakikira vao nivoaka, saingy tsy nety nanao izany i Jagger. Ny biraon'ny Fanavotana Emotional dia nihanika teo an-tampon'ny horonan-taratasy teo amin'ny andaniny roa amin'ny Atlantika ary ny hira dia ny fahatelo tany Etazonia.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 1981, ny tarika dia manome indray miaraka ary manaiky fa tamin'izay taona manomboka avy amin'ny vaovao ny fanazavana ao amin'ny fitsidihana any Etazonia. Ny fanoratana hira vaovao sy ny famoahana lisitra hafa dia mitarika haingana, fotoana be loatra ho an'ny fampisehoana. Tamin'ny taona io ihany dia namoaka vilia Tattoo Ianao (ny faharoa ao amin'ny UK sy ny fitoerana aloha teo amin'ny United States) maro ireo zavatra tokony hatao amin'ny fotoana dia voarakitra, ny rakikira nahazo. Izany koa dia mihatra amin'ny "Start Me Up" tokana, izay niakatra nankany amin'ny toerana faharoa tao amin'ny tabilao tokana. Hira roa ( "Miandry eny Namana" sy "Tops") nitendry gitara, Mick Taylor, roa nilalao Sonny Rollins saxophonist Jazz ( "mpanompo" sy ny "Miandry eny Namana"). Ny fitsidihana tolo-kevitra ho an'i Etazonia no lehibe indrindra sy hatrizay hatrizay - nanomboka ny band nanomboka ny 25. Septambra ary nifarana 19. Desambra. Noraisina an-tsoratra ny sasantsasany, ka nahatonga ny album Still Still (American Concert 1981). Nokapohiny ny tabilao - vita fahaefatra tany Angletera ary fahadimy tany Etazonia.
Tamin'ny tapatapaky ny taona, 1982, tamin'ny fankalazana ny faha-roanjatoany faha-roambinifolo, dia nitondra an'i Stones ny fampisehoana tany Eoropa, izay tsy nilalao nandritra ny enin-taona. Chuck Leavell, piano Allman Brothers Band, dia nanatevin-daharana ny fitsidihana Eoropeana. Tamin'ny fiafaran'ny taona dia nanasonia fifanekena iray tapitrisa dolara 28 ny tarika mba hamatahana azy amin'ny alalana efatra hafa. Ankehitriny dia vao teo ambanin'ny elatry ny CBS Records ny vato.
Talohan'ny nandaozan'i Stones ny mari-pamantarana Atlantika, afaka namoaka ny rakitsary Undercover tao 1983 (ny fahatelo tany UK sy ny fahaefatra tany Etazonia). Na dia teo aza ny fanakianana tsotsotra sy ny mpanamory fiaramanidina tao amin'ny top-tsoratra folo, dia tsy nahafeno ny andrasana ny fivarotana ny rakikira. Angamba satria ny band dia tsy nanao fitsidihana amin'ny fifaninanana mba hanohanana ny fivarotana ilay rakikira. 1984 dia efa nizara ny fizarana alban'ny Stones taloha nataon'i CBS.
Niova tsikelikely ny fifandraisan'i Jagger sy Richard. Mick Jagger dia nanasonia ny fifanarahana soloin'i Richard tamin'ny CBS, ary maro tamin'ireo asa soratr'i Jagger tao amin'ny 1984 no navoaka tao amin'ny rakikirany. Jagger dia nanambara ihany koa fa reraky ny miasa amin'ny Rolling Stones izy. Tao amin'ny 1985, nandany ny rakikirany manokana i Jagger nandritra ny androny. Ny asa vato matevina (ny laharana fahaefatra any Grande-Bretagne sy Etazonia) dia nomena an'i Keith Richards, mpandray anjara lehibe indrindra an'i Ronnie Wood. Navoaka tao amin'ny 1986 ilay rakikira ary noraketina tao Paris. Tsy niditra tao amin'ny studio i Jagger nandritra ny fanoratana, ka dia nandao ny asa rehetra tao Richards izy.
Tamin'ny volana desambra dia maty i 1985 noho ny vono olona mpiara-manorina mpiara-miasa, Stones, piano, mpitantana ny lalana Ian Stewart. Ny tarika dia nikarakara ny fampisehoana 1986 tamin'ny fankalazana ny volana Febroary. Nandritra ny roa andro, i Stones dia nandray ny loka Gramey ho an'ny fanatanterahana ny fiainana.
Ny alàlan'ny "Dirty Work" dia nahitana tsikera miverimberina, na dia teo aza ny fahombiazan'ny "Harlem Shuffle" tokana. Noho ny fifamatorana nifanaovan'i Jagger sy Richards dia nandà fitsangatsanganana i Jagger mba hampiroborobo ny asa goavana. Izy kosa dia nandeha tamin'ny diany irery, ary nilalao Stones koa izy. Richards indraindray miresaka momba ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo amin'izao fotoana izao ho "Ady Lehibe Faharoa". Noho ny fankahalana ny fifankatiavana dia nijanona teo alohan'ny fahaverezana ilay tarika. Jagger zana-kazo izy no Boss (6. Grande-Bretagne, 13. Ao Etazonia) sy ny Primitive Cool (26. 41 any Grande-Bretagne. US) hankafy ny etsy ambony kely eo ho eo Rating. Ao 1988, nandritra ny fotoana inona na inona vato Keith Richards irery voalohany namoaka ny album, Talk no Cheap (37. Grande-Bretagne, 24. USA). Nahazo valiny tsara avy amin'ny mpankafy sy ny tsikera ny rakikira, ary nahazo ny firaketana volamena i Etazonia.
Tamin'ny fiantombohan'ny 1989, ny Rolling Stones (anisan'izany i Mick Taylor, Ronnie Wood, ary Ian Stewart posthumously) dia naseho tao amin'ny American Rock and Roll Hall of Fame. Jagger sy Richards dia nanomboka niasa tao amin'ny rakikira manaraka, Steel Wheels (faharoa tany Angletera, ny fahatelo tany Etazonia). Ity volavolan-dalàna ity dia miverina amin'ny endrika, araka ny asehon'ny "Mixed Emotions", "Rock ary toerana sarotra" ary "Mihisatra mihomehy anao". Ny rakikira ihany koa dia manasongadina ny hira "Continental Drift", izay nosoratan'i Stones tao amin'ny Tango Maraokana tao 1989. Ity horonantsary ity ihany koa dia namoaka ny The Rolling Stones any Maraoka.
Ny album dia arahin'ny hetsika fampisehoana amin'ny Amerika Avaratra, Japana ary Eoropa mitondra ny lohateny hoe Steel Wheels / Urban Jungle Tour. Ny fifaninanana dia naharesy ny fitsangatsanganana rehetra teo aloha niaraka tamin'ny fahatsorany. Ireo Predictabs dia ny Color Living sy ny Guns N 'Roses. Tao amin'ny fampisehoana Stones, mpihira Bernard Fowler sy mpihira Lisa Fischer dia nanatevin-daharana ny sehatra. Ny blaogy concertpoint (6 ao Grande Bretagne sy 16, USA) ary miaina ao amin'ny Max dia nanasongadina ny fitsidihana.
Ity fizahan-dalan'ny fampisehoana ity dia ny fitsidihana farany an'i Bill Wyman, izay nanapa-kevitra ny handao ny Rolling Stones taorian'ny taona maro. Ny fivoahany dia tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Janoary 1993. Taorian'ny nandaozany dia namoaka ny autobiography an'i Stone Alone i Wyman, izay nahitan'izy ireo avy tao amin'ny diariny izay nataony tamin'ny andro voalohan'ny tarika. Taona vitsivitsy taorian'ny nandaozany, dia nanangana ny Rhythm Kings an'i Bill Wyman ary nanomboka nanoratra sy nifanaraka indray.
Taorian'ny fahombiazan'ny fitsidian'ny Steel Wheels / Urban Jungle, nanome baiko mendrika ny band. Afaka namoaka rakikira jazz roa i Charlie Watts tamin'io fotoana io, Ronnie Wood dia navoaka iraika ambin'ny folo taona taty aoriana ny solo-solo manaraka, Slide On This; Keith Richards dia nanoratra ny solo-drakitra faharoa, Main Offender (45, UK ary 99, any Etazonia). Izy dia nandamina fitsangatsanganana kely kokoa (ankapobeny ao amin'ny efitrano) miaraka amin'ny fampisehoana lehibe ao Espaina sy Arzantina. Mick Jagger dia nahavita nanapaka tamin'ny alakamisy alemana Wandering Spirit (12 any Angletera, 11 any Etazonia). Vola be no namidy ilay rakikira - tany Etazonia no nahazoany rakitra volamena, nivarotra eran'izao tontolo izao misy roa tapitrisa.
Taorian'ny nandaozan'i Wyman, dia nanova indray ny orinasam-panesoana indray i Stones, amin'ity indray mitoraka ity dia maka ny Virgin Records. Navoakany ny dikan-dahatsary efa navoakany izay nampidiriny ny rakitra vaovao. Ireo albums rehetra manomboka amin'ny Sticky Fingers hatramin'ny Steel Wheels. Virjiny ihany koa dia tonga niaraka tamin'ny fanangonana vaovao Jump Back (16, UK ary 30, any Etazonia). Ao amin'ny 1993, ny band dia miditra ao amin'ny studio ary manomboka miasa amin'ny rakitsary hafa. Navoaka tao amin'ny 1994 izy ary nomena anarana hoe Voodoo Lounge (voalohany tany Angletera, faharoa tany Etazonia). Nosoloin'i Darryl Jones, mpilalao basin'i Bill Wyman, izay niara-nilalao tamin'ny Miles Davis sy Sting teo aloha. Ny tarika dia manana safidy amin'ny mpanao baolina Charlie Watts, ny bas ary ny amponga dia tokony hiara-miasa ao amin'ny Rolling Stones. Voarakitra an-tsarimihetsika goavana ilay rakikira, nihoatra ny fanantenana ny varotra. Ao Etazonia, ny album dia platinum avo roa heny. Ny ankamaroan'ireo mpitsikera dia nankasitraka ny feo "nentim-paharazana" izay nataon'ilay mpamokatra vaovao Don Was. Ny Voodoo Lounge dia nahazo ny loka Grammy tao amin'ny sokajy tsara indrindra rock album tao 1995.
Tao amin'ny 1994 dia navoaka ny Voodoo Lounge Tour, izay nifarana tao amin'ny 1995. Ny hira avy amin'ny fampisehoana sy fanadinana isan-karazany (amin'ny ankapobeny amin'ny akozystika) dia navoaka tao amin'ny rakitsary Stripped (9 any Etazonia sy UK). Misy koa ny dikan-dahatsoratry ny hiran'i Bob Dylan hoe "Tahaka ny vato mavo", ary koa ny "Shine sy Light", "Sweet Virginia," ary "The Spider and the Fly". Ao amin'ny 8. Ny volana septambra 1994 sy Stones dia nanamarika ny "Love is Strong" ary "Manomboka mijoro" aho amin'ny taona US MTV Music Awards. Nesorin'izy ireo ny loka nandritra ny androm-piainana nandritra ny androm-piainany.
Ao amin'ny 18. Ny Novambra 1994 nanao Stones ho tarika voalohany hiaina amin'ny fampisehoana. Ny famindrana dia nomena ny Sun Microsystems. Tsy niely izany Video (horonam-peo 10 isan-tsegondra ny tahan'ny sary), saingy mbola tsy nisy toy izany.
Ny faran 'ny nineties dia ny Rolling Stones eo amin'ny famantarana ny rakikira Bridges ho any Babylona (fahenina teto Grande-Bretagne, ny fahatelo any Etazonia), izay navoaka tamin'ny 1996. Ny lahatsary ho an'ny tokan-tena: "Misy olona nahita ny Baby?", Izay niseho sy Angelina Jolie naka an'i MTV sy VH1. Ny varotra dia tsy hafa amin'ny alahatr'io aloha (1,2 tapitrisa fotsiny any Etazonia). Ny fitsidihana manaraka, Izay nandroaka na Eoropa sy Etazonia, fa koa nitsidika an'i Amerika Atsimo, Japana sy Torkia, nampiseho akory ny halehiben 'ny fandaharana ao amin'ny nineties Stones Rödling ho fampisehoana. Avy ny fitetezam-paritra dia natambatra velona kokoa birao No Security (67. Grande-Bretagne, 34. USA), izay ny ankamaroan'ireo hira mbola velona unreleased amin'ny Albums.
Rehefa nifarana ny 2001 Mick Jagger namoaka ny rakikira fahaefatra irery Goddess teo am-baravarana (44. Grande-Bretagne, 39. USA), izay mifangaro Nahazo famerenana. Herintaona taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro 11. Septambra, Jagger sy Richards nitendry ny hira "Salt Amin'ny Tany" sy ny "malahelo anao" amin'ny Fampisehoana ho an'ny New York City. Saingy niaraka tamin'ny tarika iray hafa ankoatra ireo sisa tamin'ny Rolling Stones izy ireo.
Ao 2002, Forty Licks (2, Etazonia sy UK) no navotsotra nandritra ny 40 taona nanjakan'ny tarika. Ity fametavetana ity dia namidy mihoatra noho ny 7 tapitrisa tapitrisa. Tamin'io taona io ihany, ny gazetiboky britanika Q Stones dia nahitana ny "Bapa dimampolo izay hitanao talohan'ny nahafatesanao" ao amin'ny tabilao. Ary ny fitsidihana manaraka, izay antsoina hoe "Licks" (50-2002), dia nanome izany ho an'ireo mpankafy manerana izao tontolo izao.
Mick Jagger 26 ny lanonana fitsingerenan'ny andro nahaterahana. 2005 Jolay Group dia nanambara ny fanafahana ny hafa album, namoaka lehibe kokoa Bang (2. Grande-Bretagne, 3. USA), izay nanana ela mpankafy miandry valo taona. Nahazo tsikera manintona ilay lahatsary sy ny Streets of Love tokana amin'ny 15. ny tohatra Eoropeana iray.
Koa ny tahirin-tsary dia ny hira "Sweet Neo Con", maranitra mpitsikera ny American neoconservatism avy ny tehin'ny mpifehy Mick Jagger. Ilay hira dia saika nivoaka avy tao anaty rakikira noho ny fanoheran'i Keith Richard. Ary tamin'ny fanontaniana ny mpanohitra ara-politika na na, inona no nihaikanao ny Dixie zanany, Richards Nilaza izy fa tsy te-hiditra mpihaino sasany nolavina noho ny tafio-drivotra ara-politika tsy misy dikany ny sasany amin'ny teacup.
Toy ny mahazatra miaraka amin'ny tarika, manaraka ny fitsidihana; dia nandeha nankany Amerika Avaratra sy Atsimo ary Azia Atsinanana. Tamin'ny fiafaran'ny 2005, ny vola miditra avy amin'ny rakitra 162 dia mendrika an'arivony dolara. Ao amin'ny 18. Ny Febroary 2006 Stones dia nilalao ho an'ireo mpankafy an-tapitrisany sy iray tapitrisa ao amin'ny tora-pasika Copacabana any Rio de Janeiro.
Taorian'ny fampisehoana tany Japana, Shina, Aostralia sy Nouvelle-Zélande tamin'ny volana Martsa sy Aprily tarika 2006 naka aina, avy eo dia tokony handeha amin'ny fitsidihana any Eoropa. Nandritra izany "fialan-tsasatra" Richards i Keith hopitaly tany Nouvelle-Zélande izy ireo, satria latsaka avy amin'ny hazo ao amin'ny nosy Fidji naratra ny lohany, izay nitarika ho amin'ny asa izay dia nesorina tao amin'ny cranial fanafody mampandry ra. Ny ampahany Eoropeana tamin'ilay fitsidihana dia naharitra enina herinandro. Tamin'ny Jona 2006 ihany koa dia nanambara fa mitohy Ronnie Wood protialkoholním fitsaboana, saingy izany dia tsy misy fiantraikany amin'ny Mazava ho azy fa ny fitetezam-paritra. 21 voalahatra roa ny fampisehoana ny tarika efa nofoanana ny antony fa Mick Jagger manana olana amin'ny vozony.
Tamin'ny Septambra 2006 ny fampisehoana nifindra tany Amerika Avaratra. Rehefa nifarana ny 2006 dia "lehibe Bang Tour" fantatra ho toy ny mahasoa indrindra fotoana fitsidihana rehetra - ny vola miditra lehibe Nahatratra 437 tapitrisa dolara. Part ny fitetezam-paritra any Amerika Avaratra nitondra ny fahatelo ambony indrindra mandrakizay varotra (138,5 tapitrisa dolara) výdělečnější no hany fitsidihana any 2005 (162 tapitrisa dolara) sy ny US fitsidihana U2 tamin'izay taona (138,9 tapitrisa dolara).
Rolling Stones tao amin'ny 2008 tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Berlinale (ankavia miankavanana: Charlie Watts, Ron Wood, Keith Richards, Mick Jagger)
Martin Scorsese naka sary tamin'ny Oktobra sy Novambra 2006 New York rindran-kira Rolling Stones, izay sarimihetsika Shine Fahazavana, izay premiered in 2008. Ao amin'ny horonantsary, dia ny vato nandray vahiny ihany koa ny kintana: Buddy Guy, Jack White sy Christina Aguilera. Feonkira ny sarimihetsika nivoaka sy Hamirapiratana nisy mazava (faharoa ao amin'ny UK, ny fahiraika ambin'ny folo ao amin'ny US). Ao amin'ny iray amin'ireo New York fampisehoana ireo backstage latsaka taorian'ny fampisehoana mozika mpandraharaha, hatramin'ny ela filohan'i Atlantic Records mozika marika sy ny namana manokana tamin'ny antokon'ny miaramila mpikambana ao Ahmet Ertegun, ny vokatry ny ratra nahazo azy Herinandro vitsivitsy taty aoriana resin'ny tsy nahatsiaro tena. 83 taona izy.
Tamin'ny volana Oktobra i 2007 dia namoaka an'i Mick Jagger ny sangan'asan'izy ireo sôlôjika lehibe indrindra antsoina hoe The Very Best of Mick Jagger (57, UK ary 77, USA). Ny volana novambra, Gold Rolled: Nivoaka ny vato tsara indrindra (26 any Grande-Bretagne), izay vita tamin'ny fametrahana volamena 1975 Rolled Gold.
Ao anaty tafatafa ho 2007 Mick Jagger hoe tsy nety, rehefa mijanona ny miaramila iray toko eran'i Boligaria, ary avy eo maka tsara mendrika fitsaharana, "azoko antoka ny Rolling Stones mbola miara-manao betsaka kokoa ny ho avy sy hitsidika ny birao. Tena tsy mieritreritra ny hamarana ny zava-drehetra izahay. Raha ny amiko, resy lahatra aho fa hanohy. "Tamin'ny volana Martsa 2008 niteraka sahoan-dresaka didim-pitsarana Keith mpankafy Richards tao amin'ny première ny Shine Fahazavana, rehefa nilaza izy hoe:" Mihevitra aho fa mety tsoratra rakikira iray hafa. Fotsiny isika, inona no nampahafantatra izany intsony sarimihetsika. 'Drummer Charlie Watts mba laconically nanamarika fa indray mandeha tsy miasa intsony, narary.
Nandritra ny fahalavoana ny 2008 ao amin'ny fianarana nihaona tamin'i Mick Jagger, Keith Richards sy Mick Taylor ho any amin'ny mpamokatra Don Wasem vita nitifitra ny vaovao vocals sy ny gitara faritra ho an'ny mbola tsy vita zavatra tsy fandraketana fivoriana ho an'ny birao Sesitany amin'ny Main St .. Added famoahana ity rakikira nahita ny mazava tamin'ny Mey 2010 . Ao amin'ny UK, nankany amin'ny rakikira tabilao. Ary nony efa ho taona katroka taorian'ny 38 nahomby Stones taona poprvé.V 2011 namoaka DVD peo Tompokolahy sy tompokovavy naka sary tao 1972.
Ny 2012 Group nankalaza ny 50. fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Fandefasana vaovao roa, "Doom and gloom" ary "Iray misimisy indray" no navotsotra tamin'io fotoana io. Tamin'ny fahavaratra dia nanao ny 2013 tao amin'ny Hyde Park any Londres, izay nisy mpikambana taloha tao amin'ny Mick Taylor, izay nampiditra ny tarika tany amin'ny toerana iray tao 1969, dia nipoitra ho vahiny. Navoaka nandritra ny efa-bolana (iTunes) ilay rakikira avy amin'ny fampisehoana antsoina hoe Hyde Park Live. Tatỳ aoriana, navoaka tamin'ny DVD ilay fampisehoana teo amin'ilay anarana hoe masoandro mamirifiry: Miaina ao Hyde Park.
2014 Rolling Stones dia mitety an'i Eoropa, antsoina hoe "14 amin'ny afo". Ny fitsidihana dia nanomboka tamin'ny fampisehoana iray tao Abu Dhabi tao Emirà Arabo Mitambatra. Naverin'i Mick Taylor indray ilay fitsidihana, saingy ny vondron'olona dia nihena be rehefa 2. Ny Sobox Bobby Keys dia maty tamin'ny volana Desambra. Karl Denson nisolo azy.
Ao amin'ny 21. Tamin'ny volana Martsa dia nanambara i 2015 fa handeha ho any Amerika Avaratra ny band. Nanomboka tao Los Angeles izy io tao amin'ny trano fohy Fonda kely. Ireo rantsana marevaka no voarakitra ato. Tatỳ aoriana, ity fampisehoana ity dia voarakitra ary navoaka tao anaty CD mitondra ny lohan'ny Sticky mivelona. Ny lohateny hoe "Zip code" dia nohariana araka ny endriky ny endrika jeans amin'ny jeans miaraka amin'ny zip iray eo amin'ny fonon'ilay fiaramanidina Sticky Fingers (izay navoaka amin'ny version de-luxe ao amin'ny 2015).
3 Group. Ny Febroary 2016 dia namoaka ny fitsidihana Latina Latina voalohany. Ho fiovàna, hoy izy, hoy ilay mpihira Lisa Fischer tsy nandray anjara tamin'ny diany noho ny tetikasany solo, ary toy izany koa ilay mpihira Sasha Allen. Nandritra ny fizahan-tany, Olé Olé Olé dia nalaina sary, herintaona taty aoriana, tamin'ny DVD.
Ao amin'ny 25. Ny vondrona 2016 dia nanao fampisehoana tany Havana, Kiobà. Ny fampisehoana dia, araka ny filazan'i Mick Jagger, tena sarotra ny mandamina sy manomana. Ao Kiobà, dia efa voararan'ny fitondrana kominista ity mozika ity. Taloha, nitsidika an'i Kiobà i Barack Obama ary nanamafy ny fampisehoana. Tsy mbola nahita zavatra lehibe sy malalaka i Kiobà. Nosoratana ilay fampisehoana, ary ilay hira lava mahagaga "Midnight Rambler", izay matetika mahaliana ny tarika, dia efa naheno ny lalao, izay nantsoina hoe Havana Moon tatỳ aoriana.
Tamin'ny fiandohan'ny Desambra, 2016 dia navotsotra taorian'ny iraikambinifolo taona. Nantsoina hoe Blue & Lonesome izany. Ny band dia nandrakitra blues avy amin'i Walter Jacobs sy Willie Dixon. Mba hampiroboroboana ity rakikira ity dia efa nanomboka ny fitsangatsanganana kely Amerikana-Amerika tamin'ny volana oktobra ny tarika, nampidirina ny lalan-dàlan'ny Just Your Fool, Mialà any ambany sy Hate mba hahita anao.
Ny vondrona dia manohy mamoaka rakikira ary manao fampisehoana an-tsehatra.
Ny Stones Rolling natao tany amin'ny Repoblika Tseky tao 1990, 1995, 1998 ary 2003, isaky ny any Prague. Tao 2006, tsy maintsy nanao azy ireo tao Brno izy ireo, fa taorian'ny korontana navoakan'i Keith Richard, dia naverina ny fampisehoana ary dia nofoanana tamin'ny farany. Na izany aza dia natao indray izy nandritra ny fitsidihana Bigger Bang tao Brno tao amin'ny efitrano fampirantiana 2007 tamin'ny volana Jolay.
26. února 2018 dia nanambara ampahibemaso ny fandefasana vaovao amin'ny fitsidihana Eoropeana "No Filter". Maro ny fanirian'ny mpankafy tseky no tanteraka, Niverina tany amin'ny Repoblika Tseky ny The Rolling Stones taorian'ny 11 taona. Hivoaka ny 4. Jolay 2018 any amin'ny seranam-piaramanidina any Letnany, Prague. Ny mpikarakara dia Serge Grimaux mpihira, izay te-hamelona ny atmosfera mandritra ny fampisehoana voalohany amin'ny kianja Strahov. Se Stones nihaona tao Paris 22. October 2017 izay niasan'izy ireo nandritra ny "No Tour European Tour". Raha mikasika ny taonan'ny mpikambana ao amin'ny tarika dia azo inoana fa ity no fampisehoana farany an'ny The Rolling Stones ao amin'ny Repoblika Tseky.
Tags: 2018, Bill Wyman, Brian Jones, Carlo Little, vidin'ny, Jolay, Charlie Watts, Ian Stewart, Keith Richards, Mick Jagger, Mick Taylor, fehin-tanana, haba, Prague, RFID, Rock and roll, Rolling Stones, Ron Wood, The Rolling Stones, teny, tapakila, tapakila amin'ny aterineto, tapakila amin'ny aterineto, tapakila manerana ny aterineto, fidirana fidirana
Previous post Sarin'ny volana
Next lahatsoratra Sary rhinoceros, rhinoceros
avelao ny valiny hanafoana ny valin-